Iindaba - Yonke into ekufuneka uyazi ngoMgangatho weMoto
TPR Imoto Mats
Ikhaphethi yeeMoto Mats
TPR umboko Mat
TPE yomthi Mat
Yonke into ekufuneka uyazi ngoMgangatho weMoto
Xa sifuna ukuthenga iimethi zomgangatho wemoto, ungayifumana njani eyona mveliso ilungileyo?
Unokukhangela kuGoogle nge "mveliso yemethi yemoto", emva koko unokufumana iiwebhusayithi ezininzi, kwaye kufuneka ugwebe ukuba yeyiphi imveliso yemethi yemoto oyifunayo, kwaye ujonge izinto zemethi zemoto yile nto uyifunayo. Kukho izinto ezahlukeneyo zohlobo lweemethi zemoto: ikhaphethi, iimethi zemoto zePVC, iimethi zemoto,I-TPE iimata zemoto, Imethi yemoto ye TPR.
Okulandelayo kufuneka ujonge umgangatho weemethi zemoto, uninzi lweemethi zemoto lwenziwa ngumngundo kwiimodeli ezahlukeneyo zemoto, ke kuya kufuneka ujonge ukuba umzi-mveliso uneemodeli zemethi zemoto ozifunayo kwaye kufuneka ujonge ukuba ubungakanani obufunayo kulungile ukuvelisa, uninzi lwefektri ine-MOQ enkulu. Umzi-mveliso wethu ulungele iimethi zemoto ukulungiselela uninzi lweemethi zemoto, i-MOQ yethu iiseti ezi-5 nganye, kwaye sinamakhulu eemethi zemoto kunye nezixhobo zokubumba zomthi.
Emva koko kuya kufuneka uyazi ukuba umzi-mveliso ungakwenzela ukungunda na, kuba iodolo yakho iya kuba nkulu ngemigangatho yemoto yethu esemgangathweni ye-TPE, kwaye uya kufumana umthengi kufuneka enze umngundo ngeepateni zawo ezizodwa kunye nelogo, iya kubonisa Umahluko wemethi yemoto kwindawo yentengiso. Ipateni elungileyo iya kukuzisela ukuthengisa okuhle kwaye iya kutsala abathengi abatsha ngakumbi. Kwaye kuyanceda ukuzinzisa abathengi bakho abadala. Ishishini lakho liya kuba likhulu kakhulu ngeemethi zethu zemoto TPE. Umzi mveliso wethu unokwenza iphethini kunye nelogo kunye nesayizi yesicelo sakho, iya kukuvumela ukuba ume ngaphandle kubathengisi abaninzi.
Inqaku elibaluleke kakhulu ngumgangatho, oku kubaluleke kakhulu, ngomgangatho olungileyo, ungathengisa abathengi abaninzi, kwaye umthengi uya kuthengisa ngcono ngomgangatho olungileyo, emva koko baya kuthi bandise ubungakanani beodolo kwixa elizayo. Le yinxalenye ebaluleke kakhulu. Le yeyona njongo yomzi-mveliso wethu. Sisebenzisa ezona zinto zilungileyo ze-TPE kwiimethi zemoto kunye ne-trunk mat, kodwa ngexabiso elifanayo njengomnye umzi-mveliso. Sinenzuzo encinci, kodwa bonke abathengi bathenge iimveliso ezivela kumzi-mveliso wethu banokufumana ingxelo entle ezintlanu kubo bonke abathengi, Elinye ixesha ukuba ngumthengi wethu, naphakade sibe ngumthengi wethu. Siseka ixesha elide sisebenzisana nabo bonke abathengi. Izinto ezibaluleke kakhulu kwimveliso yethu kukusebenzisa ixabiso elifanayo ukwenza iimpahla zibengcono, sifuna ukuyiphucula ngcono kwaye ibengcono.
Inqaku lokugqibela ekufuneka unike lona ingqalelo yiphakheji kunye nokuthumela. Umzi mveliso osezantsi uya kusebenzisa umgangatho osezantsiTPE izintoKwaye baya kusebenzisa iphakheji esemgangathweni osezantsi. Iya kwenza umonakalo kwiimethi zemoto, kubaluleke kakhulu kwiphakheji.
Sinokupakisha iseti nganye yeepcs ezi-3 (ukhuko lomqhubi, ukhuko lwabakhweli, umva ongasemva) kwibhokisi enye, kwaye sinokuprinta ilogo yesiko kwibhokisi leyo. Ngale ndlela, singathumela ngqo kwidilesi oyifunayo okanye siyithumele kwindawo yokugcina izinto i-amazon. Sinokupakisha iiPC ezingama-20 ibhokisi nganye, ngale ndlela inokonga indawo, emva koko yonge iindleko zokuhambisa ngolwandle, umthengi angazipakisha kunye nebhokisi yazo emva kokuyifumana.
Ixesha lokuposa: Mar-03-2021
Umlawuli wentengiso: Welden wu
Yonke into ekufuneka uyazi ngemoto F ...
Zeziphi iindidi zemoto ezilula ukuzicoca?